Grade 1/2 Fitetezana trano - Sekoly Iraisam-pirenena ao Lyon
Vina, iraka ary soatoavinay
Tongasoa eto amin'ny talen'ny
Ny fiainana ao amin'ny ISL
Miasa ao amin'ny ISL
Mianara ao amin'ny ISL
Momba ny ISL
Sekoly ambaratonga voalohany
Momba ny ISL PTA
Ny minitra fivorian'ny PTA
Tsidiho ny tranomboky ↗
Fandraisana anjara ↗
8am mankany 4pm
Alatsinainy ka hatramin'ny zoma
«Ny hetsika rehetra
Grade 1/2 Fitetezana trano
18 Mey @ 08:00-20 Mey @ 17:00
« Mpanoratra mpitsidika (Kilasy 7 & 8)
Grade 5 dia »
Ampio amin'ny kalandrie
18 Mey @ 08:00
20 Mey @ 17:00
Ahitsio ny safidin'ny cookie
Ao amin'ny Sekoly Iraisam-pirenena ao Lyon izahay dia manolo-tena hanampy ny mpianatray hanatanteraka ny fahaizany manokana sy akademika amin'ny alàlan'ny fampivoarana ny fahaleovantena, ny fitiavana fianarana mandritra ny androm-piainana ary ny fahatsapana ny fifankahazoana sy ny fanajana.
Eken'ny na mpikambana ao amin'ny:
Manolotra cookies izahay. Raha heverinao fa mety izany dia tsindrio fotsiny ny "Accept all". Azonao atao ihany koa ny misafidy izay karazana cookies tianao amin'ny fipihana ny "Settings". Vakio ny politikan'ny cookie
Settings Ekeo daholo
Fidio izay karazana cookies ho raisina. Hotehirizina mandritra ny herintaona ny safidinao. Vakio ny politikan'ny cookie
Ireo cookies ireo dia tsy voatery. Ilaina izy ireo mba hiasan'ny tranokala.
Mba hanatsarantsika ny fiasa sy ny firafitry ny tranokala, mifototra amin'ny fampiasana ny tranokala.
Ireo cookies ireo dia miantoka fa ny tranokalanay dia miasa araka izay tratra mandritra ny fitsidihanao. Raha mandà ireo mofomamy ireo ianao dia hanjavona ao amin'ny tranokala ny fiasa sasany (oh: sarintany tsy hita, antontan-taratasy, ary fitaovana fandikan-teny tapaka).
Amin'ny fizarana ny tombontsoanao sy ny fitondrantenanao rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao, dia mampitombo ny fahafahanao mahita votoaty sy tolotra manokana.
Save Ekeo daholo